Musharixiinta Mucaaradka oo jawaab kulul siiyay Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
11 April 2021 CCWarame: “Waxay indhuhu hayaan Madaxda xilkoodu dhamaaday”
Musharixiinta ayaa sheegay in waxa uu wado Farmaajo ay yihiin sharci darro, isbaaro iyo caburin codka shacabka, taasina aysan ka aqbali doonin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa sii xoogeysanaya Xiisadda ka taagan Muqdisho, iyadoo walaac xoog leh uu shacabka soo foodsaarey kaasoo ku qaadan banaanbaxa Jimcaha uu mucaaradka qorsheeyay inuu ku qabto Daljirka Dahsoon.
Afhayeenka Musharixiinta Mucaaradka Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in aysan joojin doonin banaanbaxooda, islamarkaana u hogaansami doonin amarka Xukuumadda ee lagu mamnuucay isku-imaatinka dadweynaha.
"19-kii Febaraayo wixi dhacay waxay ahaayeen Isbaaro Dastuurka loo dhigtay, Isbaaro iyo argagixiso midna looma hoggaansamaayo," ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle, isagoo intaasi ku daray inaysan ka aqbali doonin Farmaajo inuu hor-istaago banaanbaxa Jimcaha.
Wuxuu sheegay Afhayeenka in Farmaajo uu diidan yahay sharciga dalka, islamarkaana uu doonayo inuu xoog ku sii haysto xukunka, iyadoo waqtiga uu ka dhamaaday.
"Nidaamka Farmaajo ee waqtiga ka dhamaadey ayaa sharciga diidan, waxaana u sheegaynaan inaan ka aqbali doonin fal isbaaro iyo argagaxiso midna, oo banaanbaxa uu dhici doono," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Reer Muqdisho ayaa dhexda ka galay labo manaxayaal, oo aan u tureynin shacabka, iyagoo hurinaya colaad sokeeye, oo sababi karta barakac, boob iyo xasuuq, taasoo dalka dib ugu celin karta godkii mugdiga ee uu kasoo baxayay 30-kii sano ee lasoo dhaafay.
Muqdisho waa la isku hub iyo Ciidan abuursanayaan hadda, waxaana loo diyaar-garoobey Jimcaha oo awood la isku maquunin doona, iyadoo dowladda hadda askar badan geysay meelaha laga cabsi qabo inay mucaaradka isku soo baxa ka sameeyaan.
Waxaa la jaray jidka KM4 iyo Garoonka diyaaradaha, maadaama ay degan yihiin Musharixiinta halkaasoo Jimcihii hore dagaal uu ka dhacay kadib markii qaar kamid ah Musharixiinta, oo ay kamid yihiin Khayre iyo CC Warsame ay banaanbax dhigeen.